Bilyaneerka iska leh Alibaba oo markii ugu horreysay la arkay - BBC News Somali
Ma cadda meesha uu muuqaalka kasoo duubay Jack Ma
"Kuma kulmi karno Sanya cudurka safmarka ah awgiis," ayuu Ma ku yidhi khudbaddiisa.
"Marka uu cudurka safmarka ah dhammaado, waa inaan helno waqti aan qof walba ku abaalmarinno sidii uu ugu safri lahaa Sanya, markaas kaddibna waan is arkeynaa mar kale!"
Bishii lasoo dhaafay, bangiga dhexe ee Shiinaha ayaa si khasab ah ku kaxeystay mas'uuliyiin ka tirsan shirkadda Ant Group ee hoos tagta Alibaba, waxaana khalkhal weyn la galiyay dhammaan howlahoodii ganacsi.
Bilyaneerka iska leh Alibaba oo la layahay meel uu jaan iyo cirib dhigay
Sida ay quraanjo yar ku noqotay shirkad ganacsi oo aad u weyn
Shakiga laga qabay in la la'yahay Mr Ma ayaa soo baxay horaantii bishan, kaddib markii uu ka qeyb gali waayay duubitaanka barnaamijka laga sameynayo geesiyaasha ganacsiga ee Afrika. Waa barnaamij telefishin oo lagu tartansiiyo dadka maskaxda ganacsi leh.
Inkastoo shirkadda Alibaba aysan rasmi ahaan ugu dhawaaqin in la la'yahay milkiilahooda, haddana dadka tabinayay maqnaashihiisa waxay sheegeen in la waayay meel uu jaan iyo cirirb dhigay wixii ka dambeeyay markii uu bishii October eedeymo u jeediyay hannaanka sharciyenta ee Shiinaha.
4 Jannaayo 2021